Full VIDEO Somali President Calls For Unity In Parliament Address Khudbadda Madaxweynaha ee Furitaanka Kalfadhiga 6-AAD ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya | Somalisan.com
Home Afsomali Full VIDEO Somali President Calls For Unity In Parliament Address Khudbadda Madaxweynaha...
Full VIDEO Somali President Calls For Unity In Parliament Address Khudbadda Madaxweynaha ee Furitaanka Kalfadhiga 6-AAD ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoonka Golaha Shacabka umadda Soomaaliyeed
Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi
Mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey Guddoomiye ku xigeen koowaad ee Golaha Shacabka
Guggoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka
Xildhibaannada sharafta leh ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare
Taliyeyaasha iyo Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida
Danjireyaasha Iyo dhamaan martida kale ee sharafta leh,
Waxaa sharaf ii ah in aan mar kale hortiinna imaado aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah ee furitaanka kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Hayaanka dib-u-soo noolaynta Qaranimada Soomaaliyeed ee bilowday ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toona ay dib uga noqonayaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa, dowlad iyo shacaba, in ay u midoobaan sidii ay u tirtiri lahayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed, iyo cid kasta oo kasoo horjeeda horumarka iyo dib-u-soo noolaynta qarannimada soomaaliyeed.
Sidaan horey idiinkugu ballan qaadayba waxaa naga go’an sidii loo gaari lahaa qaranimo Soomaaliyeed oo waarta, saldhig adagna leh, ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay; waxaan sidaas si le’eg shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay si dhaw ula shaqeeyaan dowladdooda, kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkeenna guud oo ah in la helo qaranimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan.
MA JIRO WAX SOOMAALINIMO KA YAR OO NAWADA DEEQI KARA!.
Waxaa hubaal ah in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan naloo ka baahanyahay dhinac kasta, in kasta oo dalkeenu ku jiro marxaladdo adag, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo bulsha ahaanba, haddaan si wadajir ah isu kaashanno oo awoodeenna isu geyno waxaan aaminsanahay in aan intaas oo idil aan ka wada gudbi karno.
Annagoo ka ambaqaadayna sidii aan si buuxda ugu hanan lahayn Qaranimadeenna, waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagallay sidii lagu sugi lahaa ammaan dalka, si rasmi ahna loogu cirib tiri lahaa argagixisada, iyo cid kasta oo khatar ku ah amniga dalka iyo ummadda Soomaaliyeed.
WAXAANSE IDIINKUGU BAAQAYAA INAAD GARAB ISTAAGTAAN WIILASHA IYO GABDHAHA SOOMAALIYEED OO NAFTOOD HURAYAASHA AH OO MAALIN IYO HABEEN U TAAGAN SIDII LOO SOO CELIN LAHAA SHARAFTII IYO XURMADDII AY LAHAYD UMMADDA SOOMAALIYEED MEEL KASTA OO AY JOOGTABA.
Waxaan sidoo kale dejinnay Qorshaha Horumarinta Qaranka oo tilmaan cad u ah sidii uu dalkeennu ku gaari lahaa horumar iyo isku fillaansho mustaqbalka IA.
Si loo gaaro Qaranimo dhammaystiran, waxaa maamulkaygu xoogga saarray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar uga gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay, iyo dejinta xeerka Qaybsashada Khayraadka dabiiciga. Waxaan dhaqan galinnay nidaamka diiwaan-gelinta KMG ah ee xisbiyada siyaasadda.
Dhinaca kale, waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka Qodobada Dastuurka ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ka wada xaajoonayaan sida – Maqaamka ay Magaalo Madaxda Muqdisho ku dhex yeelanayso hannaanka Federaalka, qaab-dhismeedka dowladda, asteynta awoodaha dowladda, hannaanka dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hannaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka ah, iyo weliba hannaanka federaaleynta maaliyadda.
Waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hannaan dimoqraadi ah oo ku dhisan nidaamka federaalka, kaasoo soo celin kara Qaranimo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, loona siman yahay.
Waxaa sidaad la socotaan idin sugaya dhamaystirka
Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka iyo dib-u- eegista Sharciga Xisbiyada Siyaasaeed oo muhiim u ah geedi-socodka dimoqoraadiyadaynta dalka, waxaanan idinka codsanayaa inaad ansaxisaan hindisayaashaas si deg deg ah, si dalku u gaaro doorasho qof iyo cod ah.
Sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore, muddadii koobnayd ee maamulkaygu jirey, waxaan saxiixay Afar (4) sharci, oo uu ka mid yahay, sharciga la dagaalanka Musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah aasaasidda qaranimo Soomaaliyeed oo taaba gasha, shuruucdaas aan saxiixay iyo kuwa kale ee idin horyaalla waxaa muhiim ah xildhibaannada sharafta leh in ay si deg deg ah u ansaxiyaan.
SHARCI BAA DAL LAGU DHISAA!!!
Sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigaygii ahaa, inaad dardar gelisaan hirgelinta sharciyada idin horyaalla iyo weliba kuwa kale oo idiin imaan doona.
Kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha Qaranimada. Sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu yagleeli lahaa hab dhaqan-dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan Qaranimadeenii dib u hananno.
Annagoo arintaas ka duulayna, waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinnay sidii deymaha nalooka cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha.
Waxaan, Alle mahaddiis, ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudahii nala ku xiray iyo gaarista yoolalkii aan kula heshiinnay hay’adda lacagta adduunka ee IMF si nalookaga cafiyo deymaha. Shurrudaha noo haray oo nalaka rabo in aan soo dhammays tirno dhammaadka bishan waxaa ugu muhiimsan dhammaystirka shuruucda la xiriira dayn cafiska.
Madashii iskaashiga Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ee SPF waxaan bogaadinayaa howshii iyo waxyaabihii ka soo baxay annagoo hirgalin doonna IA.
Sidoo kale, waxaa kobcay dhaqaalihii gudaha kadib dib-u-habayn iyo dib-u-qaabayn aan habkii ururinta dakhliga dowladda ku samaynay awgeed, waxaa arintaasi noo sahashay inaan si joogta ah u bixinno mushaarooyinka shaqaalaha kala duwan ee dowladda.
Dhinaca dib-u-heshiissinta, waxaa naga go’an inaan ummadda Soomaaliyeed dib u walaalayno, annagoo u marayna dhaqankeennii suubanaa ee is-cafinta iyo isu-tanaasulka. Mudanayaal Qaranimo waxaan ku gaari karnaa inaan is cafino, Alle u noqonno, dalkeenna dhismihiisana si wada jir ah uga qayb qaadanno. Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed qasab lagu hoggamin karo ama lagu haysan karo, waxaan leenahay, dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii lagu awr kacsan jirey!.
Mudanayaay iyo marwooyin,
Sida aad la socotaan waxa Alle mahaddiis dhawaan noo soo gabageboobay shirkii dib-u-heshiisiinta ee Galmudug, natiijada aan ka gaarnay dib-u- heshiisiintuna waxay noo fududaysay inaan hadda u gudbayno sidii aan u dhisi lahayn maamul goboleed ay yeeshaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolladaas IA.
Waxaa naga go’an inaan dhagaysanno cid kasta oo wax tabanaysa, waxaa naga go’an inaan u garowno cid kasta oo garowshiiyo mudan; waxaa naga go’an inaan raalli gelinno, cid kasta oo raali gelin mudan; waxaa naga go’an inaan ka miradhalinno dib- u-heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed,laakiin marna ma ogolaaneeno inaan dib u noqonno; marna ma ogolaaneeno inaan aqbalno wax qaranimo ka yar; marnana ma ogolaaneeno inaan aqbalno cid kasta oo is hor istaagaata dib-u-yagleelidda qaranimada Soomaaliyeed!!!.
Nidaanka Federaalku waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay inuu noqdo hab- maamulkooda-dowliga ah, illaa ay ummadda Soomaaliyeed ayadu go’aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasna, ma jirto dowlad ama koox gaara oo wax ka bedeli karta. Waxaase nasiib darro ah, in dadka qaarkiis ay si khalad ah u macnaysteen nidaamka federaalka.
Nidaanka federaalku wuxuu si cad u qeexaa awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah; laakiin ma siinayo madaxbannaani gaara ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka!. Waxaan idin xasuusinayaa in mas’uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madaxbannaanidiisa ay saaran tahay dowladda Federaalka!.
Waxaan mar kale rabaa inaan idin xasuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibedda saldhiggeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada deriska iyo kuwa caalamka labadaba – xiriir iyo iskaashi ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed.
Waxaan Shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanaan marna ka gorgortamaynin ilaalinta midnimadeenna, madaxbanaaniddeena iyo ilaalinta xuduudeheena dhulka, badda iyo cirkaba.
Annagoo arintaas ka duulaynana, waxay dowlad Soomaaliya kaalin muhiim ah uga jirtaa dadaalada loogu jiro xoojinta xiriirka iskaashi ee waddamada geeska Afrika gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada, waxaanan mar walba ku taamaynaa sidii uu Geeska Afrika ku gaari lahaa xasilooni buuxda dhinac kasta.
KALFADHIGAN 6-AAD WAA FURAN YAHAY MAANTA OO ah Oktoobar 9, 2019
Previous articleHow fake refugees from Kenya got settled in the US and Europe
Next articleFull VIDEO farmaajo Waxaan dagaal kula jirnaa Cadow aanan arkeyn
Sawirada Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mutadawiciinta Joogtada ah ee Ololaha Isxilqaan
Talyaaniga oo lagu karantiilay dadkii ku noolaa ilaa 10 Magaalo coronavirus owgiis
Faahfaahin Umadaha midoobay oo Koonfurta Suudaan u direyso 17kun askari oo kuwo Soomaali...
Somalisan News - September 20, 2018
My Sister Was Crying And Screaming, And I Was Too’: FGM Survivor Fighting To...
Somalisan News - October 1, 2018
JOURNALIST KILLED Car Bombs, Gunfire Hit Government Military Base In Southern Somalia – Residents,...
Sawirada Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mutadawiciinta Joogtada ah ee Ololaha...
Full VIDEO Garyaqaan Maryan Cariif Qaasin oraahdeedii iyo Akedeemiye Goboleydka Afka...
Talyaaniga oo lagu karantiilay dadkii ku noolaa ilaa 10 Magaalo coronavirus...
News in English955